Gịnị bụ Cazoo? - Cazoo
Mbido » Gịnị bụ Cazoo?
Nke a ọ bụ oge mbụ ị na-eme nchọgharị na saịtị a? Nabata ma ọ bụ nabata.
Na ibe ndị a, edere m Cazoo, enyi m, onye m na-akọrọ ihe ndetu m na nyocha m metụtara ụwa nke cryptocurrencies. Enwere m ike ịme ya na mpempe akwụkwọ, ma ọ bụ n'okwu, ma na ndụ m amụtala na inye ihe na-enye gị ohere ịnata. Na na enweghị ọkara ọkara oge.
Ana m ewere otu onye nsọ nke na-akọwara m ihe na ịntanetị. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ana m enye Wikipedia ego kwa afọ. Abụ m. Ihe niile. Ndị ọrụ afọ ofufo!
Y’oburu na ndetu ndia nyere gi aka, obi di m uto.
Ichoro ime m obi uto? Banye maka Binance, otu n'ime ndị kasị ibu mgbanwe n'ụwa ịzụta cryptocurrencies, na-eji m Ozi Ntuziaka koodu EV6X8DW5, ma ọ bụ site na ịpị njikọ a: https://www.binance.com/it/register?ref=EV6X8DW5. Binance si Ntuziaka mmemme na-enye ohere linker ịhọrọ ọrụ ego ọnụego nke ọ bụla azụmahịa na-kewaa n'etiti mụ na gị. Ahọrọ m ịkewa ha na ọkara, yabụ anyị abụọ nwere nwere ikike ịkwụsị 20% na ọrụ, ruo mgbe ebighị ebi! Ọnọdụ mmeri-mmeri!
Lezienụ anya nke ọma. Abụghị m onye ndụmọdụ ego. Abụ m onye ọbịa na-ede na ịntanetị. K believenịm kpukpru se okotde ke akpanikọ. Mee nchọnchọ gị. Ama m, enwere obere oge ma sie ike, mana obere nduzi a nwere ike inyere gị aka wepụ onwe gị n'ụwa a.
Gụọ: Etu esi achọta ihe ngosi ndị ahụ na-eme X100 tupu oge agafeela?
Etinye ego dị egwu ma ọ bụ ezie na ọ nwere ike ị nweta oke nloghachi na obere oge, ọ nwere ike iwepụ ha ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego, naanị ihe ị ga-eme bụ na ịnwere ike imeli ya.
Ọ na-aga n'ekwughị na ọ bụ ụwa na-adọrọ mmasị ma n'echiche m ọ ga-abụrịrị akụkụ nke ndụ anyị. Ihe mgbochi bu ihe omuma, na ...
Mkpụrụ ego nzuzo iri kacha mma yana otu esi azụta ha